Turkiga oo lagu eedeeyay in uu Taageero siiyo Xagjirinta ku dagalama Syria, Libya iyo. Somalia - Awdinle Online
Turkiga oo lagu eedeeyay in uu Taageero siiyo Xagjirinta ku dagalama Syria, Libya iyo. Somalia
February 15, 2020 (Awdinle Online) –Wasiirka Arrimaha dibadda Sacuudiga Caadil Al-Jubeyr ayaa xaqiijiyay in Boqortooyada ay kasoo horjeeddo Duulaanka Turkiga ee Syria iyo Taageerada Kooxaha waxa uu ugu yeeray Xagjirka ah ee Dalalka Liibiya iyo Soomaaliya.
Wasiirka Waxaa uu Dowladda Turkiga ku eedeeyay in kasoo horjeedo Xasiloonida Wadama Suuriya oo Xuduud wadaag yihiin, Liibiya iyo Soomaaliya.
Al-Jubeyr waxa uu hadalkaan ka sheegay Caasimadda Romalina ee Bucharest oo uu warbaahinta kula hadlay, isaga oo caddeeyay in Sacuudiga aanu marnaba aqbali doonin gardarada Turkiga ee aan ka gambashada lahayn sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaan ka soo horjeednaa u tallaabista Soohdinta Suuriya ee Turkiga, waxaana kasoo horjeednaa Taageerada Maleeshiyaadka ku kala sugan Suuriya, Liibiya iyo Soomaaliya” sidaasi waxaa yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Sacuudiga.
Sacuudiga iyo Turkiga Xiriirkooda siyaasadeed oo xumaa waxa uu khilaafkooda sii xoogeystay Bishii October sanadkii 2018-kii, kadib markii Magaalada Istanbul koox Sacuudiga ka socotay isla markaana heysatay Amarka dhaxal sugaha ay dileen Wariye Jamaal Khaashogji.
Turkiga oo helay macluumaad ku saabsan qaabka uu dilkaas u dhacay waxa uu cagta cagta u saaray Xukuumadda Riyadh oo iska bari yeeshay, markii dambena lacag magdhaw ah siisay ehelka Wariyaha, inkasta oo aysan wali xiisadda damin.
Waxaa wax laga weydiiyay Xaaladda Dalka Yemen iyo weerarada isbaheysiga Sacuudiga uu shukaanta u hayo ay ka geysanayaan, maadaama dhowr jeer lagu eedeeyay dhibaateynta dad rayid ah.
“Ma aanan dooneynin dagaalka Yemen, Waxaan faragalin ku fara gelinayay Xisbullaah iyo Xuutiyiinta, kaliya waxa aan dooneynaa in aan gaarno xasillooni” ayuu yir Wasiirka Arrimaha dibadda Sacuudiga Caadil Al-Jubeyre.
Waxa uu intaa ku daray in ku dhawaad $14 Bilyan oo doolar ay ku waaciyeen Yemen, taasi oo Gargaar ahaan uga baxday Hay’adda Boqor Salmaan, loona gudbiyay Qaramada Midoobe, dagaalka Siyaasadeed ee Yemen waxa uu tilmaamay in uu ku dhammaan doono xal siyaasadeed.
ISHA WARKA: Theunionjournal.com
Previous articleWiil Soomaali ah oo iska dhigay gabar oo lagu xirey Turkiga Faahfaahina ka soo baxayso
Next articleXOG :- Maxaa ka jira in dani & Axmed Madoobe Lagu amray inay La Kulmaan Farmaajo